Ukuhlaziywa kweeMoto ze-Honda Grom ka-2014
Uhlobo lwe-Honda Grom Isingeniso: Ubani kwiLil 'Iphakheji?
I-2014 Honda Grom, ebomvu. Ifoto © Honda
Ngoko ke, i-Honda Grom ka-2015 ixabiso lentengo kwi-$ 3,199 kuphela kunye nomdlalo we-minibike styling- kodwa isithuthuthu esinokusebenza kubantu abaqhelekileyo?
Masiqale ngokuhlaziya i-specs.
Yintoni iGrom? Ewe, kwi-surfer-thetha, eli gama libhekisela kumntwana we-punk surf, kodwa xa kufika ilungu elitsha le-pint-sized of the family of Honda, ibhayisikili elincinci lingeneka ngokupheleleyo. Ukuncedisa le 'pup iyinjini-injected, 125cc single-cooled enye kunye nombane wokuqala. Ukudluliselwa kwencwadana yesantya (ukhumbule abo?) Uphendulela isondo esele nge-drive drive, kwaye yonke iphakheji isisigidi ezingama-225 kuphela.
Ukumiswa kwephambi kokuhamba kwee-3.9 intshi, ngelixa ukumiswa kokutshatyalaliswa kwangaphambili kushukumisa 4.1 intshi ngaphambi kokuyeka. I-disc engama-220mm yangaphambili kunye ne-190mm ye-disc brit disc ihlinzeka amandla okuyeka, kwaye ukuphakama kwesihlalo ku-29.7 amasentimitha-ngaphezulu kunokuba ungalindela ukujonga ubunzima bayo be-225-pound ubukhulu kunye namagumbi amancinci angama-12 intshi.
Uluhlu olumangalisa lweGrom luquka iqoqo le-digital-cluster kunye neehoksi ezingatshintshiyo, kodwa njani le bhayisiki enobungakanani obukhwele umgibeli oqhelekileyo kwisikolo sendlela? Cofa "Okulandelayo" ukufumana.
Idibeneyo: 10 Iikhupheli ezinkulu zokuqala , ii- 10 eziPhambili zeMoto zokuQala
2014 Honda Grom: Ngendlela
Njengoko kubonwe apha, i-ergonomic yeGrom ihlala phezulu kunokuba ucinga. Ifoto © Kevin Wing
Ngeke ulindele ukuba umntu oyingqingqele ukuba ahlangane ngokukhawuleza ehamba ngebhayisiki ehamba phantsi efana ne-Grom, kodwa ukuqhuma kwe-Honda kunene kunokuba kufikelele kwisigxina esifanayo. Enyanisweni, ukuba nantoni na, ukuphakama kwesihlalo se-229.7-intshi kungabonakalisa ukude kubadlali abanomdla-ukuguqulwa kwezinto ezinobuncwane, ngokubangela ukuba abantu baninzi bavuselele umlenze phezu kwesi uhambo olufanelekileyo lwebhokhwe. Nangona i-saddle yayo iqinile ngokwaneleyo ukuphazamisa amaxesha amaninzi kwindlela, i-ergonomics jikelele ihlaziyileyo kunokuba ungayilindela ngesithuthuthu esilungile.
Injini ye-Grom ye-125cc ivutha phantse ngokukhawuleza, kwaye imbono yomgibeli webhayisiki yonke i-dash yedijithali iyawuboleka ngumoya wenkxwaleko, naphezu kobuninzi bayo. Cofa uze uqale uze ukhulule umbane wokukhanya, kunye neGrom uhambisa umqhubi we-scooter ukugxotha umgca. Ukuba ujwayele ukunqumla izitya ngelixa ukhawuleza kwibhayisiki yakho enkulu, uya kufuna ukucinga kabili malunga neGrom: ezine iindoda ezide kakhulu zithetha ukuba akukho nto iguquguqukayo ukusuka kwinqwelo elincinci, kunye nokwakha ngokukhawuleza kwijubane Ndiza kufuna ukufuphi kwinqanaba layo elingu-8,250 rpm kunokuba ungase kwibhayisiki encinci. Injini ngokubanzi isebenza kakuhle, nangona amandla ehla njengoko ukhuphuka ngokusondeleyo ku-9,250 rpm.
Ngokwexesha eliphezulu, ndakwazi ukuphuma ngaphaya kwe-67 mph, kwidolophu yesitalato- kwaye ndikholelwe, ezo zi-10 mph zokugqibela zazinzima, zindinga i-tong egcweleyo phezu kwe-loooong, e-downhill ye-tarmac. Bantwana, musa ukuzama oku ekhaya. AmaBrakes aphendula kwaye anakho ukuzisa i-Grom ukuba imise ngokukhawuleza. Kwaye, njengokuba unokucinga, ukugqithisa indlela yokuhamba kweso sithuthi kwindlela enokuyolisayo kunokuba ibingabheki enkulu, ngenxa yempembelelo yayo kunye nobukhulu obukhulu.
Ngezantsi, Iinkcukacha, Ngubani omele athenge i-Honda Grom ka-2014?
I-2014 Honda Grom, emnyama. Ifoto © Honda
I-Honda Grom, ngaphandle kokungathandabuzeki, enye yeebhayisikili abaninzi abagibeli beemoto abanakuyithintela ngesigxathu seenyawo. Kodwa uhambo olusemva kokuya kusekelwe ngokusesikweni olwenza ngokukhawuleza i-grins kunye nokuzonwabisa okungalindelekanga, ukukhumbula iindidi ezinobungakanani obubi obuya kufumana ukuba uyazifumana ukuba ukhule ngebhayisiki.
Nangona ngokuqinisekileyo kungekhona kuwo wonke umntu, i-Honda ye-3,000 Grom iyamkela kwiqela labantu abaninzi kunokuba ungalindela ngenxa ye-ergonomic yayo elawulwayo, ukulawulwa komsebenzisi, kunye neempembelelo zanamhlanje njenge-injection-injection kunye nepaneli yecomputer. kubagibeli abatsha, kulula ukufumana indawo kwiluhlu lwethu lwe- 10 Great First Motorcycles nakwimidlalo ephantsi. I-Grom ayinakuba isisombululo esaneleyo somgama omde wokuhamba kwimihla ngemihla, kodwa ukugxila kumdlalo okonwabileyo kwenza kube yinto enkulu yokutshintshwa kwezinto eziqhelekileyo ezisemadolobheni njengabantu abahamba ngeendlela, banikezela ngamashishini asemthethweni ngesithuthuthu esincinci yexabiso lebhayisiki epheleleyo.
Ukuzisola kwethu kuphela? Inyaniso yokuba injini ye-125 ye-Grom iyayivimbela ukuba ibe yinto esemthethweni yomthetho ... kodwa, abacwangcisi bemikhiqizo ye-Honda abazange baphumelele ukuba bafumane i-spinoffs ezayo njenge-150cc version, njengoko benza nge-Honda PCX. Ngenjini enkulu yomgaqo-mhlaba, i-Grom iyakwazi ukuphuma ngaphandle kwayo njengeyona microscine.
2014 Honda Grom Iinkcukacha
Ixabiso: $ 2,999
Injini: 125cc, i-cylinder enye, i-fuel injection-stroke enye
Ukuhanjiswa: Incwadana ye-4-speed manual
Amandla okusebenzisa amafutha: 1.45
Ukumiswa kwangaphambili: i-31mm ifom, e-3.9 intshi yokuhamba
Ukumiswa kwangaphambili: Ukutshatyalaliswa kwamanye, 4.1 intshi zokuhamba
I-Brake Front: I-disc engama-220mm engaqhelekanga, i-hydraulic double-piston caliper
I-Brake yangemuva: I-disc engama-190mm engaqhelekanga, i-hydraulic single-piston caliper
Ukuphakama kwesihlalo: 29.7 intshi
I-Rake / Umzila: 25º / 3.2 intshi
Isalathisi Isisindo: iiyure ezingama-225
Imibala efumanekayo: Olubomvu, omnyama
Ngubani omele athenge i-Honda Grom ka-2014?
Ukufuna ukuzonwabisa, abakhweli beepenki abanqwenela ukunqumla i-scooter ukuze bathathe i-paradigm yeklasiki yeklasi.
AmaBhanki aMaKristu aphezulu
Ukukhusela i-Ping-Pong Paddle yakho - Ukujonga emva kweRacket yakho yeTable Table
I-Grim Sleeper Serial Killer Case